Soa azo avy amin'ny maha-mpanolo-tsaina ny fiainana miroborobo - Hiroborobo Best mandry maina Sakafo
Miroborobo amin'ny fiainana dia manome sakafo kalitao tsara indrindra amin'ny vidiny mirary. Mividy sakafo io ambony fivarotana sakafo dia heverina ho mariky ny sarivongana. Afaka hanandrana isan-karazany any amin'ny tany be vilia kely kokoa ny fotoana. Tsy mba mety tsara ny sakafo sy ny fomba fanamboarana avy amin'ireo fivarotana ho an'ny antoko, fankalazana sy fotoana hafa izay tsy anananao fotoana ampy handalovana ny korontana rehetra amin'ny fikarakarana sakafo.
Ny fanomanana ny fomba fahandro rehetra ao an-trano dia mety ho korontana raha atao anaty lisitry ny vahiny lehibe ao an-tsaina. Misy lovia an-jatony hiomanana amin'ny fotoana. Manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny taranja lehibe, anisan'izany ny tsindrin-tsakafo, fety tokana dia mitaky izany rehetra izany eo amin'ny menioo.
Ho an'ny antoko lehibe, hetsika sy fanasana amin'ny mariazy, Ireo fiainana miroborobo ireo dia azo ifandraisana mba hanomezana lovia sy fomba fahandro feno raha ilaina izany. Ny fomba fiainana maoderina dia tsy mamela antsika fotoana betsaka hanaovana ireo zavatra rehetra ireo. Fotoana izao hividianana sakafo, fa tsy ny tenanay no manomana azy. Ny lovia lehibe ao amin'ny menio fivarotana toa ny sakafo tsara dia matetika no lovia mety indrindra andidian'ny mpanjifa isam-paritra.
Fanontaniana iray azontsika foana – Ohatrinona no ambin'ireo mpanolotsaina mandroso??
Ary, miroborobo ny fiainana dia manana fonosana consulting ho an'ireo izay te-ho consultant ao amin'ny orinasa. Ka amin'ity lahatsoratra ity, izahay dia hijery ireo antony tokony hahatongavanao ho mpanolo-tsaina manana fiainana vanona. Betsaka ny tombontsoa azo avy amin'ny maha consultant anao amin'ny fiainana miroborobo.
Mamorona ny fandaharam-potoananao manokana ianao amin'ny maha consultant anao ary afaka miasa mora foana amin'ny fotoana malalaka hikarakaranao andraikitra hafa. Miroborobo amin'ny fahafaha-manao fikarohana amin'ny fiainana, arakaraka ny hafainganao manokana. Amin'ny maha consultant anao, afaka miasa dimy andro isan-kerinandro mandritra ny iray volana ianao ary manangona vola ampy hahafahana miala sasatra iray volana sy hamakivakiana. Manana fahefana hampivelatra ny fifandanjana ilaina eo amin'ny asanao sy ny fiainanao manokana ianao.
– Ny fahasamihafana
Ny fahasamihafana amin'ny asanao dia afaka manohitra sy mandrisika anao, na dia miara-miasa amin'ny olona mitovy foana aza ianao dia mety hanakorontana ny fahaizanao mamorona. Na dia tsy maintsy miantehitra amin'ny asa tsy mahafinaritra aza ianao hampitomboana ny vola miditra, azonao atao ny mampifangaro asa mahafinaritra sy tontolo iainana mahafinaritra kokoa mba hampitsaharana ny monotony.
– Miasa ekipa
Ny zavatra tsara indrindra momba ny fanombohana ny asa fivelomanao mandritry ny fiainana dia azo antoka fa tsy hanao irery ianao. Hahafahanao miara-miasa amin'ireo mpikambana ao amin'ny ekipa izay mitovy amin'izany (ary tsy mitovy!) mahaliana, FAHALALANA, hevitra sy fitondran-tena momba ny asa. Izany dia miteraka ny fotoana mety indrindra amin'ny fiaraha-miasa hanombohana asa!
– Ampiasao isan'andro ny fahaizanao mamaha olana
Miroborobo ny mpanolo-tsaina amin'ny fiainana mampiasa ny fahaizany mamaha olana isan'andro hamita ilay asa sy hitazomana ny mpanjifa ho afa-po. Betsaka ny tombony azo amin'ny fampiasana tsy tapaka fahaizana mamaha olana, anisan'izany ny: fihetseham-po, fahafinaretana, andro be asa sy famoronana!
– Fampiofanana miavaka sy fampidirana
Matetika rehefa manomboka miasa ho consultant ianao, miroborobo ny fiainana dia manome fiofanana na fampidirana tsy mampino hanombohana anao. Ny tanjon'ny fampidirana / ny fiofanana dia ny fanomanana anao hahita fahombiazana; Ary noho izany, mandritra io fiofanana io, azonao atao ny manantena ny hahazo ireo loharano, fahalalana sy fitaovana hanaovana izany.
– Fianarana mitohy
Miroborobo ny consultant amin'ny fiainana, midika izany fa mianatra sy mifanaraka amin'ny fironana vaovao amin'ny indostria foana izy ireo. Ny zavatra tsara tokony hotadidina dia ny fankafizan'ny mpanjifa azy satria afaka mampivelatra hevitra mifanaraka sy mahomby ianao. Na dia mety ho sarotra loatra aza ny manaraka vaovao sy fironana hatrany, ho lasa fahazarana izany – ary mendrika ny valiny!
– Fahafahana lehibe amin'ny fitomboana
Miaraka amin'ny etika sy fanoloran-tena mety, mpanolotsaina dia afaka miaina fitomboana matihanina eo am-piandohan'ny asany.
– Famoahana mpanjifa isan-karazany
Tsy misy karazana mpanjifa manokana manakarama consultant, izay mahaliana ny fampandrosoana ny vahaolana sy ny hevitra, satria samy hafa ny toe-javatra tsirairay. Samy manana ny andrasana ny mpanjifa tsirairay, zavatra ilaina, mpihaino kendrena, vokatra sy serivisy, mba hivelomana ny mpanolo-tsaina ny fiainana hanara-maso ny sakafo sy ny fomba fahandro amin'ny karazany rehetra!
– Tombony avy amin'ny antoko
Ny tambajotra mahomby dia fomba iray hahatongavana ho consultant mahomby. Ho mpanolotsaina amin'ny fiainana miroborobo, mirona hihaona amin'ny olona goavambe amin'ny alàlan'ny fety lehibe sy hetsika mahafinaritra ianao! Ary noho izany, tena ilaina ny mankafy ny maha eo azy ary hiaraha-miasa amin'ny mety ho mpanjifa, ankehitriny sy taloha. Azo atao amin'ny alàlan'ny kafe izany, sakafo atoandro, fihaonana, na hetsika tambajotra lehibe eto an-tanàna.
– Fiantohana tsy an'asa
Miasa amin'ny maha-consultant tsara ny fiainana; tsy mila miahiahy momba ny fahazoana rosia mavokely mampatahotra ianao. Hanana asa ianao raha mbola manohy ny serivisinay ary mahita niche tsy hita eo amin'ny tsena izay mila ny serivisinao.
Avela hampiasa tsara ny herinao ho tombontsoanao manokana ianao ary hijinja ny valisoa rehetra fa tsy hizara izany amin'ny orinasa iasanao.
Vonona ho consultant? Tsindrio eto raha hiaraka na hianatra bebe kokoa momba ny komisiona sy tombony azo avy amin'ny vola tsindrio eto. Azonao atao koa ny miantsena ny anay mangatsiaka sy mahavelona ny vokatra maina eto na amin'ny fiverenana any amin'ny pejin-tranontsika sy hianarana bebe kokoa momba Miroborobo amin'ny sakafo matsiro.